_/\__ | _/\__ | _/\__
ပြုပြင်ဆဲကာလဖြစ်သည့်အတွက် အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ပါက အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ကိုသန့် ဇင်နဲ့ သူငယ်ချင်းများမှ အလှူငွေ (1500 B) Firend in Firend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿)_/\__ Smart Ghost (ခ) ဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__သန့် ဇင် ဖူးကတ်မြို့ မှ (500 B) Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် (00 ฿)_/\__့  ..... မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ (၁) Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ (၂) Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) (၃) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၄) Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၅) Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၆) NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၇) TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ < (၈) Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၉) ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၁၀) Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ (၁၁) Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ (၁) Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ (၂) Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) (၃) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၄) Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၅) Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၆) NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၇) TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ < (၈) Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၉) ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၁၀) Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ (၁၁) Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် (00 ฿)_/\__ အိုင်တီမုဆိုး သို့လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ (၁) Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ (၂) Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) (၃) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၄) Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၅) Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၆) NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၇) TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ < (၈) Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၉) ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၁၀) Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ (၁၁) Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ (၁) Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ (၂) Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) (၃) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၄) Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၅) Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၆) NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ (၇) TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ < (၈) Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၉) ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ (၁၀) Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ (၁၁) Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ မီးလောင်သံဃာတော်များအားဆေးကုရန်အတွက်အလှူငွေလှူဒါန်းသူများ Panasone balae ဆောက်လုပ်ရေး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1500 ฿)_/\__ Friend in Friend = ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1200 ฿) Smart Ghost (ခ) ကိုဖိုးချို = ဆနန်မလွန်-ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Cynthia Ko Ko (ခ) စင်သီယာ ကိုကို = ပါကရက်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ Aung Kyaw (ခ) အောင်အောင်ကျော် = လက်ကဗန်၊ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ NanShilar.Shilar (ခ) မနန်းရှီလာ = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (1000 ฿)_/\__ TaylayMalay Soe (ခ) မစိုးစိုး = ဖလန်၂၊ ဘန်ကောက်မှ အလှူငွေ (500 ฿)_/\__ Khin Maung Soe (ခ) ကိုနေမျိုးမင်းဦး = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ ကိုသန်းထိုက် = ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလှူငွေ (300 ฿)_/\__ Tin Aung Nyunt (ခ) တင်အောင်ညွန့် = မဲကောင်မြို့၊ စမွတ်စုန်းခမ်းမှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ Rattaya Raya = ဖူးကတ်မြို့မှ အလှူငွေ (200 ฿)_/\__ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် (00 ฿)_/\__ အိုင်တီမုဆို့း  ...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတို. သိသင့်သော ၄ နှစ်ပြည့် ဗီဇာ အကြောင်း
Minlwannaung.blogsport.com | 11:47 AM | အရေးကြီးသတင်း(ထိုင်း)
27/6/2014 ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားကြသူ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ အနေနှင့် ၄ နှစ်တာ သက်တမ်းကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ယခုအခါ နောက်ထပ် သက်တမ်း (၂) နှစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရမှ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တရားဝင် သက်တမ်းတိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသုိ. မိမိတို.နေထိုင်ခွင့် (ဗီဇာ) သက်တမ်းတိုးရာတွင် အထူးသတိပြုသင့်သည့်အချက်များ ( ၅ ) ချက်ရှိပြီး မှန်ကန်ပြည့်စုံရန် အထူးဂရုပြုဖို.လိုအပ်ပါသည်။ t မူရင်း ၂။ မိမိ ဓါတ် ၁။ Passporပုံ(၄) ပုံ ၃။ အလုပ်ရှင် ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.) ၄။ အလုပ်ရှင် ၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.) ၅။ အလုပ်ရှင် ၏ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ ( ခိုတာ) (ယခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်) လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်များ၏ ပါဝင်မှု. အားနည်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ဆင့်အတွက် နားလည်မှု.မရှိခြင်းတို.ကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား အများစုမှာ ကြားခံ ပွဲစားများ(အေးဂျင့်များ) မှတဆင့် ပြုလုပ်နေကြရပြီး ကုန်ကျစရိတ်များမှာလဲ နယ်မြေဒေသ အလိုက် ၆၅၀၀ ဘတ် / ၇၀၀၀ ဘတ်/ ၇၅၀၀ ဘတ် /၈၅၀၀ဘတ်/ ၁၂၀၀၀ ဘတ် စသဖြင့် ကွာခြားသည်ကိုတွေ.ရှိရသည်။ အမှန်တကယ် မှာမူ မိမိ၏အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပါက ၄၀၀၀ ဘတ် ခန်.သာ ကုန်ကျနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်၇န် အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့် ကြားခံပွဲစားများကောက်ခံသည့် ငွေကြေးကိုပေးကာ ပြုလုပ်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို.ပြုလုပ်ရာတွင် အချို. မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ အချက် (၅)ချက်အရ အချက် ၃/၄/၅ ကို မိမိအလုပ်ရှင်ထံမှ တောင်းယူခြင်းမရှိပဲ (သို.) အလုပ်ရှင်များ မှ မပေးသောကြောင့် ကြားခံ ပြုလုပ်ပေးသူများအား ၀ကွက် အပ်လိုက်ရသည်လဲရှိသည်။ှ္ကုဤတွင် ကြားခံပြုလုပ်ပေးသူများ မှ အငှားအလုပ်ရှင် နှင့် အငှား နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့် (ခိုတာ) တို. ကို အပိုငွေကြေး ကောက်ခံလျှက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ထိုသုိ.ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ မှာ အလုပ်ရှင် အမည် ၊ နေရပ် မတူညီခြင်း ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မတူညီခြင်း တို. ဖြစ်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ မိမိ အလုပ်ခွင်တွင်း ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ ဖမ်းဆီးခံရနိုင်သည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ * အမှန်တကယ် ပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များမှာ * ၁။ မိမိအလုပ်ရှင်အား ခွင့်တောင်းလျှက် သဘောတူညီချက်ရယူပါ ၂။ မိမိအလုပ်ရှင်အတွက် နိုင်ငံခြားသားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ အား အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ပါက ကြားခံပွဲစားမှ တဆင့် မှန်ကန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ * အလုပ်ရှင် အတွက် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား ခေါ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာတောင်းခံရန်လိုအပ်ချက်မှာ * ၁။ အလုပ်ရှင်၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.) ၂။ အလုပ်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.) ၃။ အလူုပ်အမျိုးအစားအလိုက် စာရွက်စာတမ်းများ (က) ရော်ဘာခြံလုပ်သား ဆိုလျှင် ဥယျာဉ်ခြံပိုင်ဆိုင်မှု.အထောက်အထား (ထဗီယမ်ထိဒင်း) (ခ ) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားသည့် အဆောက်အဦးပုံစံ (ဂ ) ပုဇွန် မွေးမြူရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ပုဇွန်ကန် ပိုင်ဆိုင်မှု. အထောက်အထား စသဖြင့် အလုပ်ရှင်၏ အထောက်အထားများအား အလုပ်ရှင်၏ လက်မှတ်နှင့်အတူ ပူးတွဲပြီး နယ်မြေ အလုပ်သမားဦးစီးဋ္ဌာန ရုံးများတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသုိ. ပြုလုပ်မှသာ မိမိ အလုပ်ရှင်အမည် နှင့် မိမိအလုပ်အကိုင် မှန်ကန်မည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ အရေးယူခြင်း ခံရမည်မဟုတ်ပါ။ * သက်တမ်းတိုးပြီးပါက ရရှိလာမည့် စာရွက်စာတမ်းများ * ၁။ မိမိPassport စာအုပ်ထဲတွင် အလုပ်ရှင်အမည် နေရပ် ဖြည့်စွက်ထားသည့် NAN-LA VISA စာမျက်နာ ၂။ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် ငွေပေးချေပြီးကြောင်း ပြေစာ စာရွက် တို.ကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး ပါက သက်တမ်း တိုးပြီးသော မိမိ Passport နှင့် မိမိ Work Permit အားလက်ခံရရှိပြီးပါက မိမိနေထိုင်ရာ နယ်မြေ ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေး အာမခံ (ဆေးရုံဘတ်) ပြုလုပ်ပြီး ဆေးရုံမှ ထုတ်ပေးသော သွေးစစ်လက်မှတ် နှင့် မိမိ Passport မိတ္တူ ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် ငွေချေပြေစာWork Permit အတူ နယ်မြေ အလုပ်သမားရုံးသို. ပူးတွဲတင်ပြပြီး Work Permit စာအုပ် အားတောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄ နှစ်ပြည့် သက်တမ်းတိုး လုပ်ငန်းစဉ် အနေနှင့် စာရွက်စာတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့်ပြုလုပ်ပါက ကြာမြင့်ချိန် မှာ (၁၀) ရက်မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ပြီးဆုံးပါသည်။ ( မကြာမှီ ထိုင်းရောက်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ (လူသစ်) အတွက် ထိုင်းအစိုးရမှ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် များထုတ်ပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။) လေးစားမှု. ဖြင့် မင်းလွမ်းနောင် (ပန်းတနော်)
Minlwannaung.blogsport.com | 5:19 AM | ..::: ဖတ်စရာမှတ်စရာ :::..
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဈေးအသက်သာဆုံးသော ပြည်ပထွက်ခွာမှု. (တရားမ၀င်)များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား အများဆုံး ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံမှာ ထိုင်းနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်မြေခြင်းထိစပ်လျှက် ရှိသော အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံသားတို. တရားဝင် (သို.)တရားမ၀င် ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု.မှာလဲ မြန်မာ့အလုပ်သမားအရေး စောင့်ကြည့်သူတို.ဧ။် ခန်.မှန်ချက်ပမာဏ လူဦးရေ (၂)
ထိုင်းအစိုးရမှာတရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသော ပမာဏမှာ ထိုလူဦးရေဧ။် ၃ ပုံ ၁ ပုံပင်မရှိပါ။
အဘယ်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို. ၀င်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများပြားရပါသနည်းဟု မေးသော် အဖြေကား
၃။ ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်မှု. နည်းပါးခြင်း
၅။ ၂ နှစ် ၃နှစ် ၁ကြိမ် ခန်. အလုပ်သမားလက်မှတ် (၁) နှစ်စာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
၆။ ထိုင်းနိုင်ငံဧ။် အလုပ်သမားလိုအပ်ချက် များခြင်း
၇။ လူကုန်ကူးသူများဧ။် အပြောကောင်းခြင်း
၈။ ခရီးစရိတ်အား အတိုးဖြင့် ပေးဆပ်နိုင်ခြင်း
၉။ ငွေပို. ငွေလွှဲရန် အဆင်ပြေခြင်း
၁၀။ အဆက်အသွယ် အရ လာခြင်း
စသော အကြောင်းအရာများကိုအခြေခံကာ မြန်မာနိုင်ငံသားတို.အဖို. ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
၁။ လူကုန်ကူးပွဲစားများမှ တဆင့်လာခြင်း(တရားမ၀င်)
၂။ နယ်စပ်မြို.များတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် (၇)ရက်လက်မှတ်ပြုလုပ်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို.၀င်ရောက်လာပြီး ပွဲစားမှတဆင့်လာခြင်း(တရားမ၀င်)
၃။ နယ်စပ် များမှ ကယ်ရီ ခေါ် ပွဲစားများဖြင့် လာခြင်း (တရားမ၀င်)
၄။ MOU ဖြင့်လာခြင်း(တရားဝင်)
စသောနည်းလမ်းများဖြင့် ၀င်လာမဆဲတသဲသဲ ပင်ဖြစ်သည်။
(အချို.မှာ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာပြီး ထိုင်းအစိုးရမှ တစ်နှစ် ဘတ်(အလုပ်လုပ်ခွင့်) ထုတ်ပေးသောအခါ ယာယီ အလုပ်သမားများအဖြစ် စာရင်းဝင်သွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် တရားဝင် အလုပ်သမားအဖြစ်သို. ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံး ၅ ရုံးဖွင့်လှစ်ကာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်)
၁။ မြ၀တီ - မဲဆောက်
မည်ကဲ့သို.၀င်လာစေကာမူ ထိုင်းနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်အရ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်လွယ်ကူသော်လည်း ၀င်ရောက်လာသူမြန်မာအလုပ်သမားတို.မှာ လုပ်အားခ မည်သို.ရသနည်းဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရန် ဖြစ်လာပါသည်။
မကြာခင်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ် နန်းစောင်ယင်လပ် တက်လာသောအချိန်တွင် တစ်နေ. လုပ်အားခ ဘတ် ၃၀၀ ပေးမည်ဆိုသောသတင်းသည် ထိုင်းလူမျိုးအလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် ရာနုန်းပြည့်မရရှိသေးပါ မြန်မာအလုပ်သမားဆိုလျှင်ဝေးလာဝေးဖြစ်သည်။
အချို.မြန်မာ အလုပ်သမားများသည် တစ်ရက်လျှင် ၁၈၅ ဘတ်၊ အချိန်ပိုကြေး ၂၅ ဘတ် နုန်းဖြင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။(အချို. .စက်ရုံများတွင်မူ ပုဒ်ဖြတ်ပေးလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ထို.ထက်ပိုသောဝင်ငွေလဲရရှိကြသူများလဲ ရှိသည်)
အချို.မှာ ၂၁၀ ဘတ် ရရှိသည် သို.သော် နည်းပါးလှပါသည်.။
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများ မှာမူ တစ်ရက်လျှင် ၂၅၀ ဘတ်(အကြမ်းသမား) ၊ ၃၀၀ ဘတ် (ဆရာ) ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
ရော်ဘာခြံသမားများကတော့ ထွက်ရှိသော ရာဘာ အလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး
အလုပ်ရှင်နှင့် ၃၀-၇၀ / ၄၀-၆၀/ ၅၀-၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဝင်ငွေအရကောင်းသော်လဲ မိုးရွာမှု. /ရော်ဘာဈေးကျဆင်းမှု. /အလုပ်ရှင်ဧ။် ခေါင်းပုံဖြတ်မှု. များကြောင့် အဆင်မပြေမှု.များလဲ ရှိသည်။
အိမ်အကူ အလုပ်သမ များအတွက်ကတော့ တစ်လလျှင် လစာ ၅၀၀၀ ဘတ် /၆၀၀၀ ဘတ်/ ၇၀၀၀ ဘတ် တို.ဖြင့် စရိတ်ငြိမ်း (သို.)စရိတ်မငြိမ်း အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
သန်.ရှင်းရေး လုပ်သား ၊ တည်းခိုဆောင် စောင့် (ဘန်ဂလို) လုပ်သားများမှာမူ တလလျှင် တစ်ဦး (၆၅၀၀) ဘတ် ခန်. နှင့် အချိန်သတ်မှတ်မှု. မရှိ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
(အထက်ပါအလုပ်များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် အလုပ်များဖြစ်ပါသည်။)
ထိုသို.ရရှိသော ၀င်ငွေများကို မြန်မာအလုပ်သမားများ ရရှိသည်လဲ ရှိသည် မရရှိသည်လဲ ရှိသည် အဆင်ပြေသည်လဲရှိသည် အဆင်မပြေသည်လဲရှိသည် ။
လုပ်အားခ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသည်လဲ ရှိသည် ။ လိူုးခြား တို.၏ ခြိမ်းခြောက် ငွေကြေး လုယက်ခံရမှု.များလဲရှိ၏ ။ အချို.မှာ ရော်ဘာ တောထဲ၌ လူမသိသူမသိ အသတ်ခံရသည်လဲ ရှိ၏ ။
သို.သော်လည်း မြန်မာအလုပ်သမားအများစုမှာ အန္တရာယ်များကိုရှောင်ကွင်းနေထိုင်းရင်း မိမိ မိသားစု စားဝတ်နေထိုင်ရေး အတွက် မိမိတို.၏ လုပ်အား ကို အသုံးပြုကာ ဆက်လက် ရှာဖွေ စားသောက်နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
ရွှေ.ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ၀င်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ ပြန်ကြည့်လျှင်
ဆန် (သာမန်) တစ်အိတ် ၁၂၀၀ ဘတ်၊
ဆီ(သာမန်) တစ်ဗူး ၃၀ ဘတ်၊
ကြက်ဥတစ်လုံး ၅ ဘတ် ၊
ကန်စွန်းရွက်တစ်စီး ၅ ဘတ်၊
ကြက်သားတစ်ကီလီု ၁၂၀ ဘတ် ၊
၀က်တစ်ကီလို ၁၃၀ ဘတ် စသော အခြေခံ စားသောက်ကုန်များကို ၀ယ်ယူစားသောက်ကြရသည်။
ယောကျာ်လေးများအရက်သောက်တတ်ပါက လောက်ခေါင်(အရက်)တစ်လုံး ၁၁၀ ဘတ် ၊ဘီယာတစ်လုံး ၅၀ဘတ်၊ ဆေးလိပ်တစ်ဗူး ၆၀ ဘတ် ၊ ကွမ်း ၅ယာ ၁၀ ဘတ် စသည်မှာလဲ အထွေထွေ အသုံးစရိတ်များအဖြစ် ထွက်ငွေဖြစ်သွားကြသည်။
အချို. မှာ မိမိတို. မိတ်ဆွေများ နှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန် ဖုန်း အားဝယ်ယူထားရပြီး ဖုန်းကဒ်ဖိုးမှာလဲ ၁လ လျှင် ပျမ်းမျှ (၅၀) ဘတ်ခန်. ကုန်ကျနိုင်သည်။
ကျန်ပါသေးသည် မဖြစ်မနေကုန်ရမည့် ထွက်ငွေ
၁။ ဘတ်မရှိသူ (အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်) ၁လ လျှင် ရဲစခန်းသို. ၅၀၀ ဘတ် (လစဉ်)ကြေး
၂။ တာမော(လူဝင်မှု.ကြီးကြပ်ရေး)သို. ၅၀၀ ဘတ် လစဉ်ကြေး
၂။ ရဲ နှင့် လူဝင်မှု.ကြီးကြပ်ရေး ဖမ်းမိပါက နုတ်ယူရန် ၅၀၀၀ ဘတ်မှ ၁၀၀၀၀ ဘတ် အတွင်း (၁လလျှင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်းမှန်းမသိ)
အချို. ဆိုလျှင် ၃လ တွင်း ၂ ခါ ပြန်မိသူများလဲရှိသည်။
၁။ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် (၁)နှစ်စာ ၁၀၀၀ ဘတ် (တရားဝင်) (ပွဲစားဖြင့်လုပ်သော် ၂၅၀၀ ဘတ်)
အများအားဖြင့် ပွဲစားဖြင့် လုပ်ကြလေ့ရှိသည်။
၂။ ဆေးရုံး အာမာခံ ကဒ် ၁ နှစ်စာ ၁၉၀၀ ဘတ်
(ပွဲစားဖြင့် ပြုလုပ်ပါက ၂၃၀၀ ဘတ်)
တရားဝင်နှုန်းထားအတိုင်းကုန်ကျမှု.မှာ နည်းပါးလှပြီး စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၁ နှစ်လျှင် ၅၁၀၀ ဘတ် ခန်.ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၅၅၀၀ ဘတ်(၆ နှစ်စာ) အချို.နေရာများတွင် ၆၅၀၀ ဘတ်
၂။ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် (၂ နှစ်စာ) ၂၅၀၀ ဘတ်(ပွဲစားဈေး ၃၀၀၀ ဘတ်)
၃။ ဆေးရုံဘတ် ၁၉၀၀ (၁ နှစ်)
၄။ ဗီဇာ သက်တမ်းတိုး (၂) နှစ် ၂၅၀၀ (တရားဝင်ဈေး)
ပွဲစားဖြင့် ပြုလုပ်ပါက ၄၀၀၀ ဘတ် ခန်. တို.ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကုန်ကျမှု.နှုန်းများမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတို. မဖြစ်မနေတွေ.ကြုံရမည့် ကုန်ကျမှု.မျိုးဖြစ်ပြီး အလုပ်မှ ရရှိသော ငွေသည် စာရေးသောက်ရေးနှင့် မိမိဘေးရှင်းရန် စာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်မှု.တို.နှင့်အတူ ကုန်လုနီးနီးဖြစ်သည်။
အချို. အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်ပြောင်းရွှေ.လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ်ရှင် မပြောင်းမိပါက ထိုင်း ရဲ များမှ ဖမ်းဆီးကာ ဒဏ်ငွေ ရိုက်ခြင်း များပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး အနိမ့်ဆုံးဒဏ်ငွေမှာ ၂၀၀၀ ဘတ် ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသော မြန်မာ အလုပ်သမားအများစုမှာ အဆင်မပြေသည်ကများပြီး အဆင်ပြေသူမှာ နည်းပါးလှပါသည်။ သို.သော် မိမိနေရပ် ဒေသ မပြန်ရခြင်း အကြောင်းမှာ အချို.က နေရပ်ရင်းတွင်း အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ ၊နေထိုင်မှု.အခက်အခဲ ၊ ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ နှင့် မိသားစု အခက်အခဲ စသော အကြောင်းအရာ များကြောင့် မပြန်နိုင်ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တ၀ဲလည်လည် နေထိုင်ကာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေရခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို.အပြင် ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းပြီး ထိုင်းဘတ်ငွေ လျော့ရဲရဲ ဖြစ်လာချိန်တွင် မြန်မာငွေ တန်ဖိုးတက် လာပြီး ယခုချိန်တွင် ထိုင်းငွေ ၁ ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၂၅ ကျပ် ပြား၆၀ ပေါက်ဈေးသို.ဆင်းသွားပြီဖြစ်သည်။
ထို.အတူ ထိုင်းရောက် မြန်မာ ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများသည်လဲ ..မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်ဖြစ်ကာ နေရပ်ရင်းသို. ပြန်ကြသူများလဲ ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
Minlwannaung.blogsport.com | 8:31 PM | ပရဟိတ
ထိုင်းရောက်မြန်မာသူငယ်ချင်းများ အဖွဲ. လေးမှ ၁၄/၅/၂၀၁၃ ရက်နေ. တွင် သမီးလေးဖူးဖူး အတွက် ဆေးကုသရန် အလှူငွေ ၃၅၀၀၀၀ (သုံးသိန်းငါးသောင်း ကျပ်) အား သွားရောက်လှူဒါန်းကူညီခဲ့ပါတယ်....။
အဝေးသို.ရောက်ရှိနေကြသော်လည်း ပရဟိတ စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ညီညီညာညာ တက်တက်ကြွကြွ တိုင်ပင်စည်းရုံးပြီး အလှူငွေများကို လှူဒါန်းခဲ့ကြသောထိုင်းရောက်သူငယ်ချင်းများကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အလှူဖြစ်မြောက်ရန် မဖြစ်မနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ညီငယ် Sky Min ကိုလဲ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
IT blog တို့ ပြောင်းရွှေးထားပါသည်
SmartGhost | 12:37 AM |
ဒီ blog မှာနောက်ထပ် it နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ phone , computer များနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လေ့လာစရာများကို
နောက်ထပ် ဒီ blog မှာ တင်တောမည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည် ဒိ blog က
တစ်ခြာလူမူရေနဲ့ပတ်သတ်သာတွေဘဲ ထားရှိတောမှာ ဖြစ်ပါသဖြင့်IT နဲ့ပတ်သတ်တဲ့
လေ့လာစရာ တိုင်ပင်စရာများကို အောက်ပါ လိပ်စာများတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာ ဆွေးနွေနိုင်ပါသည်
Facebook groups လိပ်စာကတော http://www.facebook.com/groups/485452551502787
blog လိပ်စာကတော http://thaiinmyanmarit.blogspot.com/
နည်းပညာ စိတ်ဝင်စာတဲ့သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်
SmartGhost | 10:00 AM |
သူငယ်ချင်းအာလုံ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် M F I T အမည်နဲ့phone နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ post တွေရေတဲ့ လူပါဘဲ
အခုဒီ blog မှာ phone နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ တင်တောမှာ မဟုတ်ပါဘူ နည်းပညာ တွေ လေ့လာရလွယ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့facebook group နဲ့ blog တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်
ဒါကြောင့်နည်းပညာ အကြောင်စိတ်ဝင်စာတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ၀င်ရောက်ဆွေနွေခြင် မိမိမှာရှိတဲ့
game,app များ computer software များ ရှယ်ခြင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် သူငယ်ချင်းအာလုံကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဒါက facebook group ပါ http://www.facebook.com/groups/485452551502787/
ဒါက blog အသစ်ပါ http://thaiinmyanmarit.blogspot.com/
M F I T ခေါ် http://www.facebook.com/smart.smartghost
SmartGhost | 3:46 AM | စက်ရုပ်Firmwareတင်နည်း
I Mobile I style Q3 ကို firmware ပြန်တင်ခြင်တဲ့ ဘောဒါများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တောကိုတောင်ထား တာတော့ကြာပါပြီ Imobile က offical rom မထုတ်ပေးတာကြောင့်
ကျွန်တော မတင်ပေးတာပါ ဒီနေ့ မနက်ကမှ imobile က offical rom တင်ပေးတာကြောင့်
ဒီပို့ ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ Q3 ကို firmware မတင်ခင် Q3 ရဲ့ CPU driver ဖြစ်တဲ့
MT6577 usb driver ကိုအရင်သွင်းထားရပါမယ် အာလုံok ပြီဆိုရင် imobile rom ကိုဒေါင်လိုက်ပါ
imobile istyle Q3 rom ကိုဒေါင်ရန်
4shared ကနေဒေါင်မတက်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီအတိုင်လိုက်လုပ်ပြီဒေါင်ပါ
အခုအနီရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာ gmail နဲ့ password ထည့်ပါ ပြီရင် မိမိအကောက်အပေါ်မှာတွေ့ ရပါမယ်
downloand နေရာမှာနှိပ်ပြီ ခဏစောင့်ပါ ပြီရင် free downloand နေရာမှာနှိပ်ပြီ စက္ကန့် ၂၀ စောင့်ပေးပြီဒေါင်လို့ ရပါပြီ
firmware တင်ဖို့ နောက်ထပ်ဒေါင်ရမှက Flash tool ပါ အောက်မှာဒေါင်လိုက်ပါ
SP Flash Tool ကိုဒေါင်ရန်
ဒေါင်လို့ ရလာတဲ့ FlashTool ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီရင်စောစောကဒေါင်ထားတဲ့ firmware ကို zip ဖြည့်ပြီ
ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်မှာထားလိုက်ပါ ပြီရင် firmware ဖိုင်းထဲက
အဲဒီစာတန်နှစ်ကြောင်ကို copy ကူပြီ Flast Tool ဖိုဒါထဲ copy လာကူထည့်လိုက်ပါ နဂိုမူလ
firmware ဖိုဒါထဲမှာလဲင်္ ကျန်ရှိနေရပါမယ် ဒါဆို firmware တင်ဖို့ အတွက် Flash Tool ဖိုဒါထဲက
အပြာရောင်နဲ့ Flash Tool စာတန်နေရာမှာနှိပ်ဖွင့်ပါ
ဇယာကွက်ပုံစံ flash toot တက်လာပြီဆိုရင်downloand agent နေရာမှာနှိပ်ပါ ပြီရင် MTK All inone-Da
ဖိုင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ပြီရင်ဒုတိယစာတန် Seatter-Loading နေရာမှာနှိပ်ပြီ စောစောက ဒေါင်ထားတဲ့
ဖိုင်းဝဲလ်ဖိုဒါ ထဲက 8070-bin ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ အထဲက MT6577........ စာတန်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ခဏထားတာပါ စက္ကန်၃၀လောက်ကြာရင် ပြန်တက်ပြီဖွင့်ပေးလိုက်ပါ ၅မိနစ်လောက်ကြာပါတယ် boot ပြန်တက်ဖို့ခဏနေboot အာလုံပြန်တက်လာရင် imobile istyle Q3 ကို firmware တင်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
ဒီ Rom က istyle Q3 အတွက်တာဖြစ်ပါတယ် Q3i မှာမရပါဘူ
post by M F I T
Oppo R811 ကို root လုပ်နည်း
SmartGhost | 1:02 AM | Adroid Phone Root လုပ်နည်း
Oppo R811 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်တင်ပေး လိုက်တာပါ အရင်ဆုံး root မလုပ်ခင်
မိမိ computer မှာ oppo ရဲ့ usb driver သွင်းထားရပါမယ် ဒါမှ root လုပ်တာအောင်မြင်မှာပါ
ဒေါင်လို့ ရလာတဲ့ တရုတ် software ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင် အဲကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ဒီပုံအတိုင်ပါ
ဒီအပုံတက်လာရင် မိမိဖုန်းကို computer နဲချိတ်ဖို့ အတွက် ဖုန်းရဲ့settings usb နေရာတွေးလိုက် အမှတ်လိုက်ခြစ်ပြီ ပြင်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင် ဖုန်းကို computer နဲချိတ်ပေးလိုက်ပါ
မိမိဖုန်းကို computer ကသိပြီဆိုရင် အခုအနီရောင် ပြထားတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပါ
ပြီရင်ဒီပုံအတိုင်တက်လာအောင်ခဏစောင့်ပါ တက်လာပြီဆိုရင် အနီရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပါ
ပြီရင်ဆက်သွားပါ ဒီအခါ စတင် root ပါတောမယ်
ဒါဆို root လုပ်တာအောင်မြင်ပါ ပြီ root လုပ်မဲ့ဖုန်းဟာ wifi နဲ့ အင်တာနတ်လိုင်ချိတ်ထားရပါမယ်
ဒါမှ root လုပ်တာအောင်မြင်ပါမယ် အာလုံ အဆင်ပြေပါစေ..................... smartghost
Blog Archive Jun 26 (1) Sep 28 (1) May 15 (1) Feb 21 (1) Jan 31 (1) Jan 28 (2) Jan 26 (1) Jan 24 (3) Jan 18 (1) Jan 16 (2) Jan 13 (1) Jan 11 (3) Jan 07 (14) Jan 06 (6) Jan 05 (1) Jan 04 (1) Jan 03 (1) Jan 02 (2) Dec 29 (1) Dec 28 (2) Dec 26 (1) Dec 22 (1) Dec 21 (1) Dec 20 (2) Dec 19 (3) Dec 18 (2) Dec 16 (1) Dec 15 (1) Dec 13 (4) Dec 12 (1) Dec 07 (2) Dec 05 (1) Dec 01 (2) Nov 27 (1) Nov 26 (1) Nov 24 (1) Nov 23 (1) Nov 22 (1) Nov 21 (4) Nov 20 (2) Nov 19 (2) Nov 17 (2) Nov 16 (3) Nov 15 (4) Nov 14 (6) Nov 13 (3) Nov 12 (2) Nov 11 (3) Nov 10 (1) Nov 09 (1) Nov 08 (7) Nov 07 (1) Nov 06 (2) Nov 05 (1) Nov 04 (3) Nov 03 (2) Nov 02 (3) Nov 01 (2) Oct 31 (2) Oct 30 (5) Oct 29 (4) Oct 28 (1) Oct 27 (5) Oct 26 (1) Oct 25 (7) Oct 24 (1) Oct 23 (2) Oct 22 (2) Oct 21 (12) Oct 20 (8) Oct 19 (3) Oct 18 (7) Oct 17 (2)
..::: စက်ရုပ်firmwareများ :::.. (1)
..::: ဓါတ်ပုံများ :::.. (1)
..::: ဖတ်စရာမှတ်စရာ :::.. (5)
..::: ဖုန်းနည်းပညာများ :::.. (9)
Adroid Phone Root လုပ်နည်း (31)
Adroid Phone မြန်မာစာ (3)
Nokia Symbian မြန်မာဖောင့် (6)
စက်ရုပ် app (2)
Adroid Phone Root လုပ်နည်း (31) ကဗျာ (27) ..::ကွန်ပျူတာနည်းပညာ::.. (25) စက်ရုပ်Firmwareတင်နည်း (23) SOFTWARE (16) စက်ရုပ်ဂိမ်း (16) ..::: ဖုန်းနည်းပညာများ :::.. (9) Nokia Symbian မြန်မာဖောင့် (6) ပတ်စ်ပို့ (6) ..::: ဖတ်စရာမှတ်စရာ :::.. (5) အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး (4) အရေးကြီးသတင်း(ထိုင်း) (4) လေ့လာစရာကွန်ပျူတာ (4) Adroid Phone မြန်မာစာ (3) ပန်းသီး (3) Window 8 (2) စက်ရုပ် app (2) ..::: စက်ရုပ်firmwareများ :::.. (1) ..::: ဓါတ်ပုံများ :::.. (1) Music (1) Pc Game (1) Player (1) ဂျာနယ်များ (1) ပန်းသီးပြုပြင်နည်း (1) ပရဟိတ (1) ဗီဇာ (1) ရက်ကိုးဆယ် (1)
Start @ 20/10/2012. Powered by Blogger.
ထိုင်းရောက်မြန်မာသူငယ်ချင်းများ © 2012 Design by Best Blogger Templates | Sponsored by Best Android Blogger Templates